Amiir William-ka Britain oo la kulmaya dadkii 2 masaajid lagu weeraray - BBC News Somali
Booqashada amiirka oo labo maalmood ah ayaa ka billaabanaysa xuska Anzac Day oo lagu maamuuso askartii hore ee Australia iyo New Zealand.
Wuxuuna sidoo kale la kulmi doonaa dadkii ay saameeyeen weerarradii bishii Maarso dhacay ee 50 ruux ay ku dhinteen.
Amiir William ayaa booqashadan ku matalaya Boqoradda Ingiriiska ka dib markii ay casuumaad rasmi ah ka heshay Ra'isulwasaaraha New Zealand Jacinda Ardern.
Xafiiska boqortooyada Britain ayaa sheegay in William uu "bogaadin doona dadka reer New Zeraland isaga oo ku amaanaya garab istaagii iyo rafiiqnimadii ay muujiyeen markii ay weerarrada masaajidku dhaceen."
Sannadkii 2011 ayuu ka qayb galay xus loo samaynayay 185 ruux oo ku dhimatay dhulgariir.
Hadal uu maalintaas jeediyay ayuu ku sheegay in uu ayaydii mar ka maqlay hadal macno ahaan u dhigma "cidda la jecel yahay ayaa loo murugoodaa, markaas ayuuna ku sii daray "halkan maanta waxaan ku sugannahay anaga oo idin jecel isla markaasna murugaysan."